URema uvuma uthando lwaBasetyhini + kwiiNgoma eziTshisayo zaseAfrika
TIveki yakhe ibe yeyona nto ibalulekileyo kumculo wase-Afrika njengoko uluhlu lwabaculi base-Afrika besisikelele ngeengoma zokuba vibe ukuya kwimpelaveki yonke de kube kule veki intsha.
Rema Kubonakala ngathi akayiphumli ikhefu njengoko ekhuphe iingoma ezintathu ezishushu kwiiveki ezimbini. Isenzo esithembisayo sokuba ebekulo shishini iminyaka engaphantsi kwemibini umculo wakhe umse kwizithuba zamazwe aphesheya, kwaye sonke singangqina ubungqina bokuba ingoma yakhe eyaphenjelelwa nguBini inkosikazi iyancwina.
Nditsho nesigebenga saseAfrika, Burna Boy -Osandula ukuphumelela amabhaso amabini eBET-akakhweli kwiibhuleki njengoko ebebaleka Sponono kunye nejockey yediski yaseMzantsi Afrika IKabza De Encinci kunye nabanye abadubuli bomfanekiso omkhulu Wizkid, Cassper Nyovest kwaye Madumane.
Ndithembe ukuba uyakukugcina uhlaziye iingoma zase-Afrika ezivulekileyo ukuba uzenze rhoqo ngeempelaveki njengoko besoloko besenza.
Nazi iingoma ezishushu kakhulu ezenza amaza kwi-Afrika iphela…
inkosikazi Ngaba ingoma yesithathu iRema ikhuphe kwiiveki ezimbini. Umthonyama wedolophu yaseBenin usebenzisana nayo I-Ozedikus kwaye IiAltim ukuzisa le ngoma ka-Afropop. Vuliwe inkosikazi, URema uxela uthando lwakhe kubafazi basixelela ukuba ubathanda ngayo yonke imilo, ubungakanani kunye nemibala.
2. UMayorkun ft Davido - uBetty Butter
Zimbini izinto ezifuywayo ze-DMW, UMayorkun kwaye Davido, sidibene kwakhona ukuze asinike enye i-afro banger. Le track ye-mid-tempo izaliswe ngamagama amaninzi eengoma kunye neengoma ezisasazekayo. I I-Sperooch Umkhondo ovelisiweyo ngokuqinisekileyo uza kuba kwimilebe emininzi kangangexesha elithile.
3. IKabza De Encinci ft Wizkid, Burna Boy, Cassper Nyovest kunye neMadumane - Sponono
Inkosi yoMzantsi Afrika engachazwanga ngohlobo lwe-Amapiano, IKabza De Encinci Ikhuphe i-albhamu entsha enesihloko esithi Ndiyinkosi yaseAmapiano: Imnandi kunye nothuli, kwi-albhamu kuthethe kakhulu ngokubambisana Sponono ziphi iimpawu Wizkid, Umfana waseBurna, Cassper Nyovest, yaye Madumane. Sponono yingoma edanisayo ebonisa izakhono ezinkulu zokuvelisa iKabza.
4. I-Fiokee, iSimi, kunye ne-Oxlade -Koni Koni
Igqala eliphambili laseNigeria, Fiokee, ubuyela endaweni yesehlo ngolunye uphawu olunesihloko esinye Koni Koni. Vula Koni Koni, I-Fiokee idwelisa ngoncedo lwe-vocal Powerhouse, Simi Imvumi enetalente, I-Oxlade. Ngoncedo lwemveliso evela UDJ CoublonI-trio bakwazile ukubalisa ibali lothando, ityala kunye nokuxolelwa.
5. UPraiz kunye noMI Abaga - Amaphiko
Isimbo sokuphumelela somculo se-X3M, Praiz ubuyile enkundleni ngeprojekthi entsha enesihloko Ukuya eNyangeni. Kule projekthi Amaphiko, ingoma yothando ebonisa iingoma MI Abaga. Vula AmaphikoBobabini abaculi bacula ngokufumana uthando kunye nendlela abanokonwaba ngayo.
amagcisa ase-african umculo wase-african Amaculo e-Afrika Burna Boy Cassper Nyovest Davido iingoma ezishushu zase-african IKabza De Encinci UMayorkun I-Oxlade Rema Simi wizkid
UCollins Badewa Julayi 3, 2020